ပုံမှန် K-Pop Idol ပုံရိပ်များမှ ခွဲထွက် နေသည့် Idol ၉ ယောက် | News Bar Myanmar
ပုံမှန် K-Pop Idol ပုံရိပ်များမှ ခွဲထွက် နေသည့် Idol ၉ ယောက်
ကိုရီးယားအနုပညာလောကမှာ Kpop Idol တစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုပုံစံရှိရမယ် ဆိုတဲ့ စံနှုန်းထား သတ်မှတ်မှုတွေရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီး Idol တစ်ယောက်ဆိုတာ ပိန်ပါးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်၊ ဖြူဝင်းတဲ့ အသားအရေ၊ မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေ ရှိရမယ်၊ အမျိုးသား Idol တစ်ယောက်ဟာ အရပ်ရှည်ရှည်၊ ထင်ရှားတဲ့ မေးရိုး စတဲ့ စံနှုန်းတွေနဲ့ ပြည့်မှီရမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပါ။
တကယ်တော့ လူတိုင်းမှာ အလှတစ်မျိုးစီရှိသလို ကိုယ်ပိုင် အလှအပအတွက် စံချိန်စံနှုန်း သတ်မှတ်ခွင့်လည်း ရှိပါတယ်။ အချို့ Idol တွေကတော့ ပုံမှန် Idol ပုံရိပ်တွေနဲ့ ခွဲထွက်ပြီး ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုဖော်ဆောင်ပြီး ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ ထုတ်ဖော်ပြသတတ်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ခုဖော်ပြမယ့် Idol ၉ ယောက်ကတော့ ဒီလို Idol တွေထဲက အချို့ပါ။
Hanse ကတော့ သူရဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ သိပ်မသင့်လျော်ဘူးတို့ ထင်ရတဲ့ Tattoo တွေနဲ့ Piercings တွေကို ဖော်ထုတ်ပြသဖို့အတွက် ဝန်မလေးပါဘူး။ သူဟာ တခါတလေလည်း အမျိုးသမီးဆန်တဲ့ ဝတ်ပုံစားပုံတွေလည်း ပြသပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုပုံစံမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Hanse ဟာ ချောမောနေတာပါပဲ။
Ren ဟာလည်း ပွဲဦးထွက်စက အမျိုးသမီးဆန်တဲ့ ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ ဆင်ယင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆံပင်ရှည်ထား ထားတဲ့ Ren ဟာ အရမ်းကို လှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိနေခဲ့ပါတယ်။
F(x) ရဲ့ Amber မှာလည်း Tattoo တွေအများကြီးနဲ့ပါ။ လက်မောင်းတစ်လျှောက် ထိုးထားတဲ့ Tattoo တွေကိုလည်း သတ္တိရှိစွာ ထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ပါတယ်။ K-pop အမျိုးသမီး Idol ထဲမှ ရှားပါးလှတဲ့ Tomboy ပုံစံကို ထုတ်ဖော်ပြသတဲ့ သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း Amber ဟာ လူအများကြားမှာ ထူးခြားကွဲထွက်ပီး လှပနေဆဲပါပဲ။
Jo Kwon ဟာ အမျိုးသမီးဆန်ဆန် ထူးခြားတဲ့ပုံစံတွေကို ဝတ်ပြလေ့ရှိတတ်ပီး အကြိမ်တိုင်းကိုလည်း အကောင်းဆုံး လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာချည်းပါပဲ။ LGBT Rights ကိုလည်း ထောက်ခံပေးထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် မြင့်မားတဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့လည်း ကောင်းမွန်စွာ ကပြနိုင်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
5. Hwasa ( MAMAMOO)
Hwasa ကလည်း သူမရဲ့ Tattoo တွေကို ဖော်ပြဖို့ ဝန်မလေးသလို မိတ်ကပ်မပါတဲ့ မျက်နှာပြရမှာလည်း မကြောက်ရွံ့ပါဘူး။ မြင်နေကျ အမျိုးသမီး Kpop Idol ပုံစံမဟုတ်ပေမယ့်လည်း Hwasa ဟာ ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ ကျက်သရေရှိ လှပတဲ့ သူဆိုတာ ငြင်းနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။
G-Dragon ကတော့ ဘယ်လိုဖက်ရှင်စတိုင် မျိုးကိုမဆို အပြစ်အနာအဆာမရှိ လိုက်ဖက်စွာ ဝတ်စားနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ တခါတလေ အရမ်း ယောကျာ်းဆန်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ တွေ့ရပေမယ့် ဆံပင်ရှည် ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လည်း ဆင်ယင်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီ၊ လက်သည်းနီ နဲ့ အခြား ထူးခြားတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ ပုံစံအသစ်တွေကိုလည်း ဝတ်ဆင်ပြဖို့ ဝန်မလေးတတ်သူပါ။
Hyolyn ဟာလည်း သူမရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အမိုက်စား Tattoo ကို ထုတ်ဖော်ပြသဖို့ မကြောက်ရွံ့ပါဘူး။ ပုံမှန် အမျိုးသမီး Idol တွေထက် ညိုတဲ့ အသားအရေရှိပေမယ့် Hyolyn ဟာ ကျန်းမာစိုပြေတဲ့ အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာကတော့ အားလုံး မြင်ကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲနော်။
8. Moonbyul ( MAMAMOO)
တကယ်တော့ Moonbyul ရဲ့ အလှဟာ အမျိုးသမီးဆန်ဆန်နဲ့ နူးညံ့တဲ့ အလှကို ပုံပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ယောကျာ်းဆန်ဆန် Suits အစရှိတာတွေကိုလည်း မကြာခဏဝတ်ဆင်ပြတတ်ပီး လွန်စွာလိုက်ဖက်တာကိုလည်း မြင်တွေ့ရမှာပါ။
မကြာသေးမီကတော့ Shindong ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခဲ့ပေမယ့် အနုပညာသက်တမ်းတော်တော်များများကို သာမာန် Idol တွေထက်ပြည့်ဖြိုးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပုံစံနဲ့ လှုပ်ရှားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ချစ်စရာပုံစံတွေ ၊ အရည်အချင်းတွေနဲ့ ပရိသတ်အများအပြားကို ဆွဲဆောင်နိုင်ထားပါတယ်။
Next ပရိတ်သတ်များအရမ်းသဘောကျနေကြသည့် Wonder Girls အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Lim ၏မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံများ »
Previous « ဒရမ်မာချစ်သူတွေ အကြိုက်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ Kdrama တွေထဲက ခမ်းခမ်းနားနား အိမ်ကြီးများ